Filimkii 10 sanadood ka hor saadaaliyey Feyruska Corona oo noqday filimka 2-aad ee loogu daawashada badan yahay
Mogadishu - 01:35:03
Wednesday March 11, 2020 - 22:22:56 in Wararka by Super Admin
New York -NYTimes
Ma jirin dad sidaa u badan oo xiiseynayay filimka ‘Contagion’ ee la soo saaray sanadkii 2011, inkastoo ay jilayaashiisa ka mid ahaayeen rag caan ahaa sida Marion Cotillard, Mat Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne iyo Gwyneth Paltrow, laakiin filimkaasi waxaa maanta uu noqday mid ka mid ah kuwa loogu daawashada badan yahay caalamka.
Filimkan oo uu lahaa Steven Soderbergh ayaa waxa uu ka hadlayay Feyrus halis ah oo lagu magacaabo MEV-1 oo ka dillaacaya waddanka Shiinaha, kaddibna waxaa gabadha filimkan jileysa ee Gwyneth Paltrow oo safar ku tagtay Shiinaha ay la soo noqonaysaa iyadoo qabta Feyruskan oo ay u dhimanayso aakhirkii.
Waxaa sida filimka lagu jilayo ay Atiirashadu feyruskan ka soo qaadaysaa cunta kariyihii maqaayad Shiinaha ku taalla oo ay wax ka cuntay, kaas oo isaguna taabtay Doofaar xanuunsanaa, waxaana muddo bil gudaheeda ah Feyruskan u dhimanaya 26 milyan oo qofood.
Bishii December 2019 filimkan ‘Contagion’ waxa uu ku jiray kaalinta 270 ee filimmada ugu caansan ee Warner Bros, balse haatan waxaa dadka caalamka ku nool ay dib u soo xusuusteen filimkan markii Coronavirus (Covid-19) uu ku faafay in ka badan 100 waddan oo caalamka ah.
Wuxuu filimkan haatan noqday midka 2-aad ee filimmada ugu caansan ama loogu daawashad badan yahay, waxaana uu ku xigaa filimka Harry Potter.
Markii ugu horreysay ee shineemooyinka caalamka laga daawaday filimka Contagion waxaa uu galay kaalinta 61-aad ee Filimmada ugu faa'iido soo xareynta badan, hase yeeshee haatan waxa uu Mareykanka ka galay kaalinta 20-ka filim ee ugu sarreeya iTunes-ka.
Feyruska qura ee lagu shabihi karay midka lagu jilay filimka Contagion wuxuu ahaa Hargabkii Spain ee 1918-kii, kaas oo ay u dhinteen dad ka badan 50 milyan oo qofood.
Waxyaabaha kale ee ay ka siman yihiin Coronavirus iyo qisada lagu jilay filimka Contagion ayaa ah in labada Feyrusba la isku raacsan yahay in bani’aadamka uu u soo gudbiyay xayawaan.